मेरी बास्सैकी मैयाँ र व्यवसायी निशान, ६ बर्ष सम्म लभ गरेर बल्ल बिहे गर्ने जोडी - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
Banner Newsलभ गफ
१ फाल्गुन २०७४, मंगलवार १४:३० 175
टेलिसिरियल ‘मेरी बास्सै’मा माग्ने बुढाको श्रीमती मैयाँ भएर चर्चामा आएकी अभिनेत्री सुनिता गौतम र निर्माता निशान बजगाई वैवाहिक बन्धनमा बाधिएको ८ वर्ष पुरा भैसकेको छ । निशान र सुनिताको प्रेम विवाह हो । प्रेममा रहेको ६ वर्ष पछि उनीहरुले विवाह गरेका हुन् । प्रस्तुत छ उनै जोडीसंग राधिका कडेंलले फर्सी नेटवर्कका लागि गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश लभ गफमा ।
प्रेमको सुरुवात कहिलेदेखि ?
निशान बजगाइ: सुरुवात त एस.एल.सी दिए पश्चात नै हो । शुभ कार्यको थालनी किन ढिला गर्ने भनेर । फेरी कलेज पढ्न पठाएपछि अर्कैले लैजाला फेरी पहिल्यै देखीरहेको मान्छे हो ।
बच्चै देखि मन पर्थ्यो हो सुनीता तपाइलाई ?
निशान बजगाइ: सुरुमात काँ बाट मन पर्नु ? मन पर्ने ब्यहोरै थिएन । चकचक गर्ने बानी थियो पछि बिस्तारै बिस्तारै हट्दै गयो । साथी भाइले आठ नौ मा पढ्दैमा जोडी बनाए आफू त्यो कुरामा चुकियो । उनको पूmपु मेरो दाइले बिहे गर्नुभएको त्यो भएपछि आफन्त पनि परियो भेटघाटपनि अलि धेरै हुन थाल्यो त्यसपछि अरु सबै नराम्रो उ मात्र राम्रो लाग्न थाल्यो ।
सुनिता गौतम: सानोमा त जो पनि चकचके भैहाल्छ नि ।
प्रपोज कसरी गर्नुभएको थियो निशानजीले तपाईलाई ?
सुनिता गौतम: आइ लभ यू, हामी घुम्न जाउ भन्ने खालको होइन हाम्रो लभ चाहि । सिधै बिहेनै गर्छु भन्नु भएको हो उहाँले । बिहे गर्नु पर्छ भन्ने थाहा भए देखिनै तिमीलाईनै बिहे गर्छु भन्ने सोंचेको हो मैले हाम्रो सबैथोक मिल्छ भन्नु भएको थियो । अब जस्तै भएपनि पहिलो पटक हुन्छ भन्न डर लाग्यो मलाई । अनि मैले नाई भनेपछि त्यसो भए ममी संगै कुरा गर्छु भनेर मेरो ममीसंग पनि कुरा गरिसक्नुभएको रहेछ उहाँले त ।
ममी संग चाही के कुरा गर्नुभएको थियो ?
निशान बजगाइ: म बोल्न चाहि पहिलेदेखि नै कडा खालको नै थिए । रिलेटीभ नै पर्ने भएको ममीसंग पनी बोल्न खासै गाह्रो भएन त्यसैले मैले आफ्नो कुरा राखे ।
सुनिता गौतम: म उसलाई मन पराउछु बिहेनै गर्छु उसंग भनेर भन्नु भएछ मलाई ममीले पछि भन्नुभयो । ठीकै हुनुहुन्छ उहाँ चिनीराखेकै मान्छे हो उहाँको राम्रै बानी छ भन्नुभयो । तिमीहरुको उमेर पुगेपछि बिहे गर्दा भैहाल्छ भनेर ममीले भनिसकेपछी मैले हुन्छ भने ।
ओके भन्दाको पल सम्झिनुस न ?
सुनिता गौतम: त्यतिखेर हामी जु मा घुम्न गएका थियौं । अनी लेज र चना किनेको थियौं । अनी उहाँले बिहे गर्छु यस्तै कुरा गर्नुभएको थियो अनि म नबोली बसेको भएर रिसाएर लेजको प्याकेट फुटाएर चना पोख्दीएर हिड्नुभएको थियो । पछि कुरा गर्दै गएपछि हुन्छ भनेको त्यहाँबाट हुन्छ भनेको अहिले सम्म हुन्छ नै भयो ।
६ वर्षसम्म प्रेममा रहदाको अनुभव
निशान बजगाइ: छ सात वर्ष लभ गरेर बिहे गर्ने जोडी कम नै हुन्छन् तर हामी उदाहरण बनेका छौं ।
सुनिता गौतम: ६ वर्षको अबधीमा मैले खोजेको उहाँबाट पाउने कुराहरु पाए । अब यो मान्छे संग बिहे गरे भने मैले दुःख पाउँदिन भन्ने लाग्यो ।
विबाह फिक्स हुदाँको पल
सुनिता गौतम: मेरो भन्दा पहिले बहिनीको बिहे भैसकेको थियो । गाउँमा त्यही त हो बहिनीको बिहे भैसक्दा पनि किन दिदीको बिहे भएन भन्ने होइन । त्यसपछि त अब त बिहे गरेपनि बाल बच्चा भैहालेपनि पाल्न सकिन्छ भन्ने भयो अनि बिहेको निधो गरियो ।
निशान बजगाइ: फिक्स हुदाँको पल त के हुनु जग्गा पहिलै बैना गरेर राखेको पास मात्र त गर्न बाँकी थियो त्यही गरियो । खुशी लाग्या थियो ।
विबाहको लागि जग्गेमा बस्दाको पल
निशान बजगाइ: जग्गेमा बस्दा मलाइ त अरु देखेर लाज लागेको थियो । सबै आउने ज्वाई भन्ने आफूलाई अप्ठेरो फिल हुने क्या । रमाइलो प्लस लाज भएको थियो ।
सुनिता गौतम: मलाई चाहि एकदम अनौठो फिल भएको थियो । पहिल्यै देखी चिनेको मान्छे भएपछि एकदम गाह्रो भैरहेको थियो । सधैको लागी यो घर छोडेर जाने हो बा आमा बाट पराई भए भन्ने लागेर होला नरमाइलो भएको थियो ।
हैट ! मेरो अनुहार फरक बनाउदा बन्ने खालको छैन त : बुद्धि तामाङ